Samachar Batika || News from Nepal » नियमित से’क्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? देखिन्छ शरीरमा यस्तो लक्षण(तस्विर सहित)
नियमित से’क्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? देखिन्छ शरीरमा यस्तो लक्षण(तस्विर सहित)
निमयित यौ’न सम्बन्ध राख्ने महिला वा पुरुषलाई किटान गर्न गाह्रो छ । तर, महिलाको भने केही शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने दाबी गरिएको छ । पुरुषको तुलनामा केही महिलाको शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने गर्छ ।
महिलाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै परिवर्तन भइहाल्छ ।
के कारण छ त्यसको पछाडी ?
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हि’पको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो । यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौ’न सम्बन्ध राखे
सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेको एक अध्ययनअनुसार नियमित यौ’न सम्बन्ध राख्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा नै धेरै पटक यौ’न स’पर्क गर्ने महिलाहरुको नि’तम्ब अर्थात हि’प फुलेर ठूलो हुने गर्छ ।
उनीहरुको हि’पको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हि’प ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै स’मस्या नहुने भन्ने अध्ययनले देखाएको।
प्रकाशित मिति १० माघ २०७६, शुक्रबार ०८:२९